Dhacdo.com - News: Ciidamo fara-badan oo Itoobiyaan ah oo soo dhoobtay deegaanka Feer Feer “shacabka maxay ka yiraahdeyn”
14,901,302 unique visits
Ciidamo fara-badan oo Itoobiyaan ah oo soo dhoobtay deegaanka Feer Feer “shacabka maxay ka yiraahdeyn”
Cutubyo ka tirsan ciidamadda wadanka Itoobiya ayaa soo dhoobtay deegaanka feer feer ee gobolka Hiiraan, iyadoo cabsi xoogan ay ka muujiyeen shacabka faraha badan ee halkaasi ku dhaqan.
Ciidamadaan ayaa la-sheegay in shalay galab ay halkaasi soo gaareyn, isla-markaana waxay ku hubeysan yihiin noocyada kala duwan ee hubka iyo gawaarida waaweyn ee uraalaha loo-yaqaano.
Ciidamadaan oo aad u fara-badnaa ayaa deegaanka Feer Feer ka wada, baaritaano kala duwan, iyadoo shacabka ku dhaqan deegaankaasi ay muujinayaan baqdin xoogan, bacdamaa ay deeganadaasi ka ag dhaw yihiin xoogaga hubeysan, gaar ahaan Mujaahidiinta Al shabaab.
Xarakada Al shabaab ayaa laga baqdin qabaa inay weeraro gaadmo ah kusoo qaado deegaanka Feer Feer oo ay shalay galab soo gaareyn ciidamo xoogan oo Itoobiyaan ah, kuwaa oo deegaanka Feer Feer ka wada baaritaano kala duwan oo deegaanka ku aadan.
Dhanka kale shacabka halkaasi ku sugan ayaa sheegay inay si-wanaagsan ula dhaqmeyn ciidamadda dalka Itoobiya, hase ahaatee waxay sheegeyn inay aad uga wal-walsan yihiin weeraro ku dhufo oo ka dhaqaaq ah inay kusoo qaadaan Mujaahidiinta Al shabaab, oo ku caan baxay ku dhufo oo ka dhaqaaq.
Si kastaba ha’ahaatee xaaladda deegaanka Feer Feer ee gobolka Hiiraan ayaa iminka ah mid degan, hase yeeshee wixii warar ah ee kusoo kordha waxaan kusoo qaadan doonaa wararkeyna dambe haddii uu Rabi Idmo. Nagala Soo Xiriir dhacdo@hotmail.com ama dhacdo@gmail.com
New York on July 26 2010 10:37:44 ·
0 Comments · 696 Reads